XOG:- Waa kuma shaqsiga loo maleynayo inuu qabto xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Waa kuma shaqsiga loo maleynayo inuu qabto xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele?
Inkastoo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe uu haatan ka soconaayo olole balaaran oo ay wadaan siyaasiyiin isku soo sharaxay xilka madaxtinimada maamulka Hirshabeele ayaa hadana waxaa jira shaqsiyaad ka socda madaxtooyada Soomaaliya oo wada dadaal ah in xildhibaanada maamulkaasi ay codad uga raadinayaan shaqsigii noqon lahaa madaxweynaha maamulkaas.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo aynu heleeyno ayaa inoo sheegaya in ilaa haatan seddax musharax oo kasoo jeeda beesha Xawaadle ay shaaciyeen damacooda ku aadan inay qabtaan xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele, kuwaas oo kala ah Maxamed Cabdi Waare, Cali Maxamuud Caraale iyo Siyaasi Cali C/laahi Cosoble.
Seddaxdaas musharax oo mid walba si iskiis ah isku soo caleemo saaray, ayaa wararka hoose aynu ka heleeyno magaalada Jowhar waxay sheegayaan in madaxtooyada Soomaaliya ay dhaqaale adag ku bixin doonto sidii uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele ku noqon lahaa Siyaasiga Cali C/laahi Cosoble oo haatan gacan-saar dhaw la leh madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, Maxamed Cabdi Waare oo isagana ka mid ah musharixiinta tartanka ugu jirta xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ayaa dhawaan munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar wuxuu ku shaaciyay damaciisa qabashada xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele.
Siyaasigaan Maxamed Cabdi Waare ayaa u muuqda shaqsi isku haleynaya urur goboleedka IGAD oo mudooyinkii ugu dambeeysay ay wada-shaqeyn ka lahaayeen kulamadii la isugu soo dhaweynayay duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Labadaasi siyaasi ee Cali C/laahi Cosoble iyo Maxamed Cabdi Waare ayaa midkood loo maleeynayaa inuu xilka madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele ku guuleysto.
Ugu dambeyntii, warar hoose oo goordhaw naga soo gaaray magaalada Jowhar ayaa inoo sheegaya in halkaasi ay haatan gaareen shaqsiyaad ka socda madaxtooyada Soomaaliya oo siyaasiga Cali C/laahi Cosoble kala shaqeyn doonno sidii uu ugu guuleysan lahaa kursiga madaxweynaha maamulkaas, taas oo lagu wado inay dhacdo 15-ka bishaan aynu ku jirno ee October.